Umkhiqizi wePlywood Wezinkuni Ongcono Kakhulu kanye Nefekthri |I-Xinbailin
Sakha Ipulangwe Elibomvu/Ukhonkolo...
I-PP Evikela Amanzi...
Ifilimu engu-18mm ebhekene nePlywood Fil...
Ifilimu ebhekene ne-plywood inokumelana nokugqwala okuphezulu nokumelana nomswakama, kulula ukuhlanganisa nezinye izinto, ukuhlanza nokusika kalula.
Umbala we-plywood ebhekene nefilimu uyagqama, uhlanzekile, ubushelelezi, futhi ukubukeka kumnyama (obomvu, onsundu noma njengoba kudingekile), futhi ilogo ingaphrintwa ngokuya ngezidingo.
Ifilimu yethu i-plywood ebhekene nayo inokuqina okuhle, akulula ukukhubazeka, ayiguquki, futhi ingasetshenziswa kabusha izikhathi ezingu-15-20, ezinobungani bemvelo futhi intengo iyathengeka.
Ifilimu ebhekene ne-plywood ikhetha uphayini wekhwalithi ephezulu kanye ne-eucalyptus njengezinto zokusetshenziswa;Iglue esezingeni eliphezulu neyanele isetshenziswa, futhi ifakwe ochwepheshe ukulungisa ingcina;Uhlobo olusha lomshini wokupheka we-plywood glue lusetshenziselwa ukuqinisekisa ukuxubha kweglue okufanayo nokuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo.
Phakathi nenqubo yokukhiqiza, abasebenzi kudingeka bahlele amabhodi ngendlela enengqondo ukuze bagweme ukufaniswa okungavumelani kwesayensi kwamabhodi aphindwe kabili, ukupakishwa kwamabhodi awumongo, kanye nemithungo eminingi phakathi kwamapuleti.
Umsebenzi wokukhiqiza wamukela ubuchwepheshe bokucindezela okubandayo/okushisa, futhi ulawula ngokuqinile izinga lokushisa elicindezelayo, ukuqina kokucindezela, kanye nesikhathi sokucindezela ukuze kuqinisekiswe amandla okucindezela okuhle kwamapuleti.
Imikhiqizo yenze izinqubo eziningi eziqinile zokuhlolwa kwekhwalithi, ukuhlela ukuthunyelwa ngemva kokupakisha.
Inkampani yethu yokuhweba ikakhulukazi isebenza njenge-ejenti yezifanekiso zokwakha ezithengiswa ngokuqondile yi-Monster factory.Izifanekiso zethu zisetshenziselwa ukwakhiwa kwezindlu, imishayo yamabhuloho, ukwakhiwa komgwaqo, amaphrojekthi amakhulu kakhonkolo, njll.
Imikhiqizo yethu ithunyelwa eJapan, UK, Vietnam, njll.
Kunabathengi bezokwakha abangaphezu kuka-2,000 XNUMX ngokubambisana nemboni yeMonster Wood.Njengamanje, inkampani ilwela ukwandisa izinga layo, igxile ekuthuthukisweni komkhiqizo, nokudala indawo yokubambisana enhle.
Izinzuzo zomkhiqizo wethu
1. Iizinga oI-ur board plywood izinzile, ukunamathela kokuqala kungu-≧6N, futhi ukumelana nokuqina kuhle.
2. Ukusebenza kokusetshenziswa kuphezulu, isifanekiso sokhuni asikhubazekile noma asisontekile, futhi singasetshenziswa kabusha izikhathi eziningi.
3. Ubukhulu bebhodi buyiyunifomu futhi i-glue ekhethekile isetshenziswa.Qinisekisa ukuthi impahla yebhodi ewumongo iyibanga A, futhi ukujiya komkhiqizo kuyahlangabezana nezidingo.
4. Isifanekiso asiqhekeki, nge-modulus elastic elastic, ukumelana kwamanzi nokumelana nokugqwala.
5. Usayizi ngokwezifiso ayatholakala.Iqinile futhi iqinile/Kulula ukuyihlanza nokusikwa/Ukumelana kahle namakhemikhali.
1.Isitifiketi: CE, FSC, ISO, njll.
2. Yenziwe ngezinto ezinobukhulu obungu-1.0-1.2mm, okungama-30% -50% ahlala isikhathi eside kunezifanekiso ezisemakethe.
3. Ibhodi eliwumgogodla lenziwe ngezinto ezithinta imvelo, izinto ezifanayo, futhi isifanekiso asihlanganisi igebe noma i-warpage.
Xiangxi County, Beijing
Iphrojekthi kaDalian, uLiaoning
Isifanekiso se-Eucalyptus sithunyelwe e-Jingdezhen, e-Jiangxi
Le yindawo ka Origin I-Guangxi, China Indaba Eyinhloko i-pine, i-eucalyptus
I gama le-brand Inunu Ingqikithi uphayini, i-eucalyptus noma ecelwe ngamakhasimende
Inombolo Yemodeli Ifilimu ebhekene nePlywood Ubuso/Emuva emnyama (ingakwazi ukuphrinta ilogi)
Ibanga/Isitifiketi FIRST-CLASS/FSC noma iceliwe Glue MR, melamine, WBP, phenolic
Usayizi 1830*915mm/1220*2440mm Okuqukethwe umswakama 5%-14%
Ubukhulu 11.5mm ~ 18mm noma njengoba kudingeka Ukuminyana 600-690 kg/cbm
Inombolo Yeziqhwaga 8-11 izingqimba Ukupakisha Ukupakisha okujwayelekile kokuthekelisa
Ukujiya Ukubekezelelana +/-0.3mm I-MOQ 1*20GP.Okuncane kuyamukeleka
Ukusetshenziswa Ngaphandle, ukwakhiwa, ibhuloho, njll. Imigomo Yokukhokha T/T, L/C
Isikhathi sokuthumela Zingakapheli izinsuku ezingama-20 ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda
Q: Yiziphi izinzuzo zakho?
A:1) Izimboni zethu zinesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-20 zokukhiqiza i-plywood ebhekene nefilimu, ama-laminates, i-shuttering plywood, i-melamine plywood, i-particle board, i-wood veneer, ibhodi le-MDF, njll.
2) Imikhiqizo yethu enekhwalithi ephezulu yezinto zokusetshenziswa kanye nokuqinisekiswa kwekhwalithi, sithengiswa ngqo efekthri.
3) Singakhiqiza i-CBM engu-20000 ngenyanga, ngakho-ke i-oda lakho lizolethwa ngesikhathi esifushane.
Q: Ungakwazi yini ukuphrinta igama lenkampani kanye nelogo ku-plywood noma amaphakheji?
A: Yebo, singaphrinta ilogo yakho ku-plywood namaphakheji.
Q: Kungani sikhetha i-Film Faced Plywood?
A: Ifilimu Ebhekene Ne-Plywood ingcono kunesikhunta sensimbi futhi ingakwazi ukwanelisa izidingo zokwakha isikhunta, ezinsimbi zikhubazekile kalula futhi azikwazi ukubuyisela ukushelela kwayo ngisho nangemva kokulungiswa.
Q: Iyiphi ifilimu enenani eliphansi ebhekene neplywood?
A: I-plywood ye-finger joint core ishibhe ngentengo.Ingqikithi yayo yenziwe ngeplywood egaywe kabusha ngakho inenani eliphansi.I-plywood ye-finger joint core ingasetshenziswa izikhathi ezimbili kuphela ku-formwork.Umehluko ukuthi imikhiqizo yethu yenziwe ngekhwalithi ephezulu ye-eucalyptus/pine cores, engakhuphula izikhathi ezisetshenziswe kabusha izikhathi ezingaphezu kweziyi-10.
Q: Kungani ukhetha i-eucalyptus/pine for the material?
A: Ukhuni lukagamthilini luminyene, luqinile, futhi luyavumelana nezimo.Ukhuni lukaphayini lunozinzo oluhle kanye nekhono lokumelana nokucindezela kwezinhlangothi.
Okwedlule: Ukwakha Iplanga Elibomvu/I-Concrete Formwork Plywood
I-Melamine Faced Concrete Formwork Plywood
Incazelo Yomkhiqizo Azikho izikhala eceleni zokuvimbela amanzi emvula ukuthi angangeni.Inokusebenza okuhle okungangeni manzi futhi indawo engaphezulu akulula ukushwabana.Ngakho-ke, isetshenziswa kaningi kunamaphaneli ajwayelekile aminated.Ingasetshenziswa ezindaweni ezinesimo sezulu esibi futhi akulula ukuqhekeka futhi hhayi ukonakala.Ifilimu emnyama ebhekene nama-laminates ngokuyinhloko i-1830mm * 915mm kanye ne-1220mm * 2440mm, engakhiqizwa ngokuvumelana nobukhulu ...
Ifilimu Emnyama YaseBrazil Ebhekene NePlywood Yokwakhiwa
Incazelo Yomkhiqizo Azikho izikhala eceleni zokuvimbela amanzi emvula ukuthi angangeni.Inokusebenza okuhle okungangeni manzi futhi indawo engaphezulu akulula ukushwabana.Ngakho-ke, isetshenziswa kaningi kunamaphaneli ajwayelekile aminated.Ingasetshenziswa ezindaweni ezinesimo sezulu esibi futhi akulula ukuqhekeka futhi hhayi ukonakala.Ifilimu emnyama ebhekene nama-laminates ikakhulukazi i-1830mm * 915mm kanye ne-1220mm * 2440mm, engakhiqizwa ngokuvumelana nemfuneko yokuqina ...
Ifilimu Ebhekene nePlywood Black Board
Imininingwane Yomkhiqizo Indlela yokuthuthukisa ikhono lokukhetha le-formwork yokhuni, sicela ubheke izici ezilandelayo: Okokuqala, sicela uhlole ukuthi ingaphezulu lesifanekiso sokhuni libushelelezi futhi liyisicaba: libushelelezi futhi liyisicaba, okwenza kube lula ukudilizwa ngesikhathi sokusetshenziswa, ubuso bukakhonkolo bushelelezi, futhi bubonisa inani leglue ebusweni (inani eliningi leglue, elikhanyayo futhi eliphansi phezulu).Okwesibili, noma ngabe ...
15mm Formwork Phenolic Brown Film Ebhekene nePlywood
Incazelo Yomkhiqizo Ingaphezulu lale 15mm Formwork Phenolic Brown Film Faced Plywood imelana kakhulu nokugqwala nomswakama, ibushelelezi futhi kulula ukuyicwecwa kusimende we-formwork futhi kulula ukuyihlanza.Umnyombo awungeni manzi futhi ngeke uvuvuke, uqine ngokwanele ukuba unganqamuki.Amaphethelo e-plywood ebhekene nefilimu ensundu ahlanganiswe ngopende olungenamanzi.Izinzuzo Zomkhiqizo • Ubukhulu: ...
I-Black Film Color Veneer Board Ifilimu Ebhekene Ne-Plywoo...
Imininingwane Yomkhiqizo Izakhiwo ezinqunywa ukuhlolwa kwemishini: ikhwalithi ezinzile, ukunamathela kokuqala ≧ 6N, ukumelana okuhle kwe-tensile, ukusebenza okuphezulu, ithempulethi yokhuni ayiwohloki noma ayigoqeki, izinga lokuphinda lisetshenziswe.Ubukhulu bebhodi bufana ne-glue ekhethekile.Qinisekisa ukuthi ibhodi eliwumgogodla liBanga A futhi ubukhulu bomkhiqizo buhlangabezana nezidingo.Isifanekiso asiqhekeki, sine-modulus enwebekayo eqinile, kulula ukuyihlanza nokusikwa, iqinile...
I-Advantage 1. Akukho ukuncipha, akukho ukuvuvukala, akukho ukuqhekeka, akukho deformation ngaphansi kwezimo lokushisa eliphezulu, flameproof futhi fireproof 2. Ukuhlukahluka okunamandla, umhlangano elula futhi disassembly, uhlobo, ukuma kanye nokucaciswa kungenziwa ngokwezifiso ngokuvumelana nezidingo zakho 3. Inezici ye-anti-insect, anti-corrosion, ubulukhuni obuphezulu kanye nokuzinza okuqinile Ipharamitha Into IValu...